Isivivinyo Samahhala se-Amazon Prime Video sezinsuku ezingama-30 (2020) - Indlela Eqinisekisiwe - Ezokuzijabulisa
Ukusakazwa ku-inthanethi sekuguquke kwaba umngcele omusha ngokwethulwa kwezinhlelo zokusakaza zama-Smartphones afana ne-Amazon Prime Videos. Abantu bathanda isipiliyoni sokuzijabulisa esingaphazanyiswa kuneziteshi ezivamile ze-TV. Ama-Prime Videos eza nenqwaba yezici ezisebenziseka kalula. Ngokuhambisanayo, ikhwalithi yokuqukethwe iyamangaza ukuthi wonke umuntu ufuna ukukuhlola.
Ama-Prime Videos akulethela uhla lwezintandokazi ze-TV namabhayisikobho avela emhlabeni wonke. Awunayo futhi umkhawulo wesifunda. Kodwa-ke kunemali yokubhaliselwa enamathiselwe kulezi zingxoxo. Uma unqena ukuthola lokhu okubhalisile, mhlawumbe isivivinyo samahhala sezinsuku ezingama-30 sizokwazi ukucacisa noma ikuphi ukungabaza.
Bhalisela izinsuku ezingama-30 - Isivivinyo samahhala
Izinzuzo nge-Prime Video Trial Free:
Isivivinyo samahhala sezinsuku ezingama-30 sivumela i-Amazon ukuthi yakhe ukuthembana nawe njengomhlinzeki wesevisi. Ungahlola izici zayo nohla oluphelele lwezinsizakalo ezizotholakala njengelungu elibhalisiwe. Ngakho-ke, ngesilingo, ungabona ukuthi okuqukethwe kungokwakho noma cha. Nazi ezinye izizathu ezenza isivivinyo sibe ngumqondo ongcono.
Okuqukethwe kwamahhala:Awukho umkhawulo esivivinyweni sezinsuku ezingama-30 sama-Prime Videos. Ngakho-ke, uyakwazi ukufinyelela uhla oluphelele lokuqukethwe. Ungabheka kakhulu ukubuka imibukiso nama-movie, ukuwalande, noma ukuwamake ngokuzayo.
Isinqumo Esingcono:Ngemuva kokubhekana nesilingo, unganquma ukuthi ukubhaliswa kwe-Amazon Prime Video kufanelekile ukutshalwa kwemali noma cha. Izinsuku ezingamashumi amathathu yisikhathi esifanele sokuqonda ukuthi yini u-Prime Videos akulethela yona etafuleni.
Inzuzo Yokuthenga:Isivivinyo samahhala sezinsuku ezingama-30 samahhala siza nokufinyelela okuphelele kubulungu be-premium. Ungasebenzisa lobu bulungu uku-oda nokuthenga online. Izokunikeza ukuzilibazisa nokunikezwayo okufanayo noma yiliphi elinye ilungu eliyinhloko elizokuthola.
Eqela ngaphezulu:Noma ngabe uhlela ukuba ngumbhalisi, kungcono ukusizakala ngesilingo samahhala. Kucishe kufane nokuthola inyanga eyengeziwe kuphakheji yakho yokubhaliselwe. Ngokuphawulekile, kuthiwani uma unquma ukuphuma kokubhalisile? Lesi sivivinyo sezinsuku ezingama-30 siyindlela enhle yokuqiniseka.
Izinyathelo Zokuthola Isivivinyo Samahhala Sevidiyo:
Ungavakashela i-Prime Video esemthethweni noma iwebhusayithi ye-Amazon. Ingxenye ehamba phambili ngokubhalisela i-Amazon, noma ukuthola isivivinyo, isebenza kuwo wonke amapulatifomu e-Amazon, kufaka phakathi amasayithi wokuthenga kanye ne-Amazon Music. Landela lezi zinyathelo:
Iya kokuthi 'Ukubhalisa Kwami' noma 'Okubhaliselwe.' Lapho uzothola inketho yokuqala isilingo sakho samahhala.
Ngenye indlela, i-Amazon ivame ukukhombisa amabhanela ukuqala isivivinyo samahhala kwabangewona amalungu. Ngakho-ke ungachofoza kulokho ukuze uziqondise kabusha.
Qiniseka ukuthi unekhadi elivumelekile noma enye inketho yokukhokha esekelayo evela ku-Amazon.
Imiyalo iqonde ukulandela. Kufanele ukhethe olunye lwezinhlelo zokuqala isilingo. Inzuzo yakho yesilingo izobonisa uhlelo olukhethayo.
Yilokho kuphela okudingekayo. Ukuphela kokufanele ukwenze chofoza ku-Start Trial.
Ungawasebenzisaphi ama-Prime Videos ngemuva kokubhalisela ukuvivinywa?
Ungasebenzisa Amavidiyo Aphambili kunoma iyiphi ipulatifomu. Kukhona uhlelo lokusebenza olusemthethweni lweselula olutholakalayo ongalusebenzisa futhi usakaze amavidiyo nganoma yisiphi isikhathi. Ungalanda okuqukethwe ukuze ubukele kamuva.Ngenye indlela, ungadlala amavidiyo amakhulu ku-Laptop noma kwi-PC yakho ngokuvakashela isiza esisemthethweni bese ugcwalisa imininingwane yakho yokungena ngemvume. Awukho umkhawulo obekwe ngokuqinile ohlotsheni lwedivayisi ongayisebenzisa.
Ubulungu obuyinhloko bunweba kwamanye amapulatifomu e-Amazon. Ngakho-ke ungajabulela i-Amazon Music ngokusakazwa kwekhwalithi ephezulu yomculo. Ukuthenga kwe-Amazon kuzokulethela lonke ulwazi lwakamuva, okunikezwayo nezibuyekezo. Ungasebenzisa ukulethwa okuyinhloko nezinye izici ezifanayo.
Ukuhambisana kwamavidiyo amakhulu:
I-Prime Videos iyahambisana nazo zonke izinhlelo ezisebenzayo: i-Android, i-iOS, ne-Windows. Ungayisebenzisa kuma-Smartphones, i-PC, ama-Tablets, noma enye idivayisi. Njengoba itholakala ngefomethi yewebhusayithi, ungasebenzisa noma isiphi isiphequluli ukufinyelela okuqukethwe kwe-Amazon. Noma kunjalo, ezinye iziphequluli zihambisana kangcono kunezinye.
1Q. Ngabe Kukhona Okukhokhiswayo Ku-Amazon 30-Days Trial?
Iminyaka:Azikho izinkokhelo ezeqile zokujabulela isivivinyo sezinsuku ezingama-30. Kodwa-ke, kunezimo lapho i-Amazon idlulisa imali kusuka ekhadini lakho lesikweletu noma ku-akhawunti ukuyigunyaza. Kodwa-ke, lezi zimali zincane kakhulu ukuthi kuseseyisivivinyo samahhala. Ukuqinisekisa ukukhokhiswa okuzayo noma ukuvuselelwa kokubhaliselwe.
2Q. Ngingathola Isivivinyo Sezinsuku Ezingama-30?
Iminyaka:I-Amazon inikeza isilingo sezinsuku ezingama-30 kubasebenzisi ababhalisiwe. Uma ufuna ukuzama esinye isivivinyo samahhala, kuzofanele usebenzise i-akhawunti ehlukile enemininingwane yokukhokha. Ayikho indlela yokuthi usebenzise i-akhawunti efanayo kabili esikhathini sesivivinyo sezinsuku ezingama-30.
3Q. Ingabe ukuvuselelwa okuzenzakalelayo kokubhaliselwe kwe-Amazon?
Iminyaka:Yebo, ukuvuselelwa kobulungu be-Amazon prime ngemuva kokuphela kwesivivinyo. Izokukhokhisa ngokohlelo owukhethe ekuqaleni ngenkathi ukhetha isilingo samahhala. Ngakho-ke, kuwumqondo omuhle ukukhansela okubhaliselwe ngaphambi kokuba ubulungu bakho buphele uma unganelisekile ngale nsizakalo.
4Q. Zingaki Izikrini ezinikezwa yi-Amazon Prime?
Iminyaka:Ngokubhalisa okujwayelekile, ungasakaza kuzikrini ezintathu ngasikhathi, ngaphandle komkhawulo. Kuyatholakala ku-cross-platform, futhi uyakwazi ukufinyelela kokuqukethwe okukhokhele. Ngakho-ke uma ukhokhele okuqukethwe kwe-HD, izotholakala kuwo wonke la mapulatifomu, i-PC, iselula, noma yini enye.
Ukubhaliselwa kwakho kwe-akhawunti eyodwa kwe-Amazon kusebenza ezweni eliwela izwe. Ngakho-ke, ungasebenzisa i-akhawunti efanayo noma yikuphi lapho uya khona, ngaphandle kokukhathazeka. Lokhu kusebenza esivivinyweni sakho sezinsuku ezingama-30, futhi. Ngakho-ke uma uhlela ukuvakasha ngenkathi ujabulela i-Amazon, yithathe.
Kungumqondo omuhle ukuthi uhlale uhlola okuthile ngaphambi kokukuthenga. Isivivinyo se-Amazon sezinsuku ezingama-30 yisinyathelo esihle esibeka phambili kunezinye izimbangi. Ngenkathi ezinye izinsizakalo zokusakaza zizama ukukhipha izinketho ezifanayo, i-Amazon ihlala i-ace ngenxa yokuzilibazisa kwayo nge-akhawunti eyodwa esebenza kubo bonke.
Ingabe uhlela ukuphumula ezinsukwini ezingama-30 ezizayo, noma uhlela ukuya eholidini? Ungathini ngokuthola i-Amazon ngezidingo zakho zokuzijabulisa? Thola isivivinyo sakho samahhala namuhla futhi ujabulele i-premium, okonga idatha, nokuqukethwe okulungele umndeni ngaphandle komkhawulo.
Izipesheli Zabafundi Okufanele Uzihlole
I-Spotify Student Isaphulelo
I-NordVPN Black Friday 2020 - 83% OFF (Amadili amahle)
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zomculo (Ezamahhala nezikhokhelwayo) - i-Android ne-iOS
imidlalo efana ne-minecraft enezibhamu
ungayithola kanjani i-crunchyroll premium
ama-movie amasha wokukhishwa mahhala ongawabuka ku-inthanethi
bukela i-tv online shows iziqephu ezigcwele zamahhala